२ London यूरो को लागी लन्डन भाग्नु - विशेष प्रस्ताव! | यात्रा समाचार
यदि तपाईंसँग एक दिन छुट्टी छ र तपाईंलाई के गर्ने थाहा छैन भने, तपाईं लन्डनमा किन जानुहुन्न?। यो बौलाहा जस्तो देखिन्छ, तर यी एक्सप्रेस यात्राहरू जडान जडान जहिले पनि जडान विच्छेद गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ र हाम्रो जेबको लागि पनि। हामी दृश्यको परिवर्तन गर्दछौं, एक संक्षिप्त तर निश्चित रूपमा धेरै गहन मार्गमा।
यो जस्तो प्रस्ताव संग, हामी संग दुई पटक सोच्न पनि समय छैन। न त तपाईंलाई ठूलो सूटकेसको आवाश्यक पर्नेछ, किनकिaबाट हाते झोला हामीसँग पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ। यदि यो त्यस्तो हो भने, जहाँ तपाइँ हेर्नुहुन्छ, यो एक राम्रो विचार हो जुन हामी मिस गर्न सक्नेछैनौं। के तपाईं यसै गरी यात्रा बुक गर्न चाहनुहुन्छ?
1 २ London यूरोका लागि लन्डनमा उडान गर्नुहोस्
2 लन्डनमा होटलeयूरोका लागि
3 के एक दिन मा लन्डनमा हेर्न
२ London यूरोका लागि लन्डनमा उडान गर्नुहोस्
जब हामी यात्राको विचार गर्छौं यो एक मुख्य गन्तव्य हो। निस्सन्देह, लन्डनमा धेरै आकर्षणहरू छन्। अब हामी तिनीहरूलाई केवल एक दिनमा र २ 25 यूरोमा देख्न सक्छौं। के धेरै आकर्षक छ? ठिक छ, यो रिजर्व गर्न उत्तम प्रस्ताव हो। तपाईं म September्गलबार सेप्टेम्बर २ on मा छुट्नुहुनेछ र दिउँसो १२ बजे तपाईं पहिले नै लन्डन भूमिहरूमा पाइला टेक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईंले दिनभरि ती आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ।
बुधबार बिहान, तपाईलाई बिदाइ गर्नु पर्छ म्याड्रिडमा फर्कनको लागि। तपाईं संग यात्रा हुनेछ Ryanair कम्पनी एक सीधा उडान मा र हात सामान संग। यो दृश्यको परिवर्तनको लागि पूर्ण विकसित हो, यदि केहि घण्टा सम्म मात्र। के तपाईंले पहिले नै निर्णय गरिसक्नुभयो? ठीक छ भने, तपाईं आफ्नो आरक्षण बनाउन सक्नुहुन्छ अन्तिम समय.
लन्डनमा होटलeयूरोका लागि
यदि विमानको टिकटको आश्चर्यजनक मूल्य छ भने, होटल कम हुन सक्दैन। हामीले एउटा भेट्टायौं जुनमा कोठा प्रति रात मात्र 8 यूरो हुनेछ। यस अवस्थामा हामी केवल एउटा मात्र पास गर्नेछौं, यो उत्तम भन्दा बाहिर आउँछ। त्यसको बारेमा 'रानी एलिजाबेथ चेल्सी'। यो एक पब माथि अवस्थित छ, कोठा साझा छ र केन्द्रबाट करीव kilometers किलोमिटर को दूरीमा छ। कुनै श doubt्का बिना, केहि घण्टा खर्च गर्न यो आवश्यक छ। यसलाई बुक गर्नुहोस् Hotels.com!.
अवश्य पनि, यदि तपाईं केहि अलि बढी परिष्कृत चीज चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग 'रावण गोरा होटेल' कोठा छ। यो करिब5किलोमिटरको दूरीमा पनि छ, पार्कि parkingसँगै वाइफाइ पनि छ। रात 473युरो हुनेछ किनकि यो XNUMX-तारे होटेल हो। तपाईंसँग तपाईंको एकल कोठा हुनेछ, यद्यपि बाथरूम साझा गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं यो विकल्प रुचाउनु हुन्छ भने यो पनि उपलब्ध छ Hotels.com.
के एक दिन मा लन्डनमा हेर्न
हामीसँग हाम्रो यात्रामा घण्टा गणना गरिएको छ, त्यसैले हामीले उनीहरूको फाइदा लिनै पर्छ। यो गर्नका लागि जब हामी पुग्छौं र आफैलाई पत्ता लगाउँछौं, हामी रेलमा जान्छौं बिग बेन र त्यहाँ हामी पनि रमाइलो गर्नेछौं वेस्टमिन्स्टर प्यालेस। त्यसोभए तपाईं जान सक्नुहुन्छ ट्राफलगर स्क्वायर। यो केन्द्रीय पोइन्ट मध्ये एक हो किनकि यसले दुबै संसद र वेस्टमिन्स्टर अबेलाई सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकहरू मध्ये एक जोड्दछ: पिक्डाडिली सर्कस।
त्यस पछि, तपाईं जेम्सको पार्कमा पुग्न सक्नुहुनेछ। एक सही पोइन्ट को लागी आवाजबाट बच्न र एक सुन्दर ठाउँ को मजा लिन। उसको पछि, अर्को स्टप ले हामीलाई पुर्‍याउँछ Buckingham, जहाँ रानी एलिजाबेथ द्वितीय बस्छन्। त्यहाँ तपाईं ११::11० मा गार्डको परिवर्तन देख्नुहुनेछ। यो पछाडि जान र वेस्टमिन्स्टर ब्रिज पार गर्ने समय आएको छ किनभने त्यहाँ हामी तथाकथित पहुँच गर्न सक्दछौं 'रानीको पैदल यात्रा'। हामी हाम्रो छेउमा थेम्स र रमाईलो गर्नेछौं, असंख्य बारहरू वा रेष्टुरेन्टहरू पनि हतार नगरीकन पिउन सक्षम हुन।
यो तस्बिर लिन अपरिहार्य छ जहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ 'लन्डन आँखा'। एउटा ठूलो पा since्ग जुन २००० देखि हामीलाई शानदार दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। ठीक सूर्यास्तमा, यो कल ध्यान दिएर राम्रो समय हो 'टावर ब्रिज' किनकि यो उज्यालो हुनेछ र अवश्य पनि, यसले हामीलाई छोड्ने छविहरू प्रभावशाली भन्दा बढी हुन्। एक भिक्टोरियन ड्रब्रिज जसले विश्व भरका पर्यटकहरूको धेरै फ्ल्याशहरू आकर्षित गर्दछ। अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग समय छ भने, तपाईं जहिले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 'सान पाब्लोको गिरजाघर', किनकि यो विश्वमा दोस्रो ठूलो हो। निस्सन्देह, त्यहाँ पाइपलाइनमा अन्य धेरै चीजहरू छन्, तर एक दिनको रूपमा, हामी निश्चित रूपमा यसलाई पूर्ण रूपमा लिनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » २ day यूरोका लागि एक दिनको लागि लन्डन भाग्नुहोस्